नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाली विद्यार्थीहरुले अमेरिकामा साँस्कृतिक दुत बनेर प्रस्तुती दिए !
नेपाली विद्यार्थीहरुले अमेरिकामा साँस्कृतिक दुत बनेर प्रस्तुती दिए !
- भूपनारायण घर्तिमगर, फेयरफेक्स भर्जिनिया अमेरिका
George Mason University ले बिगत पैतिस वर्ष देखि International Week at GMU को आयोजना गर्दै आएको रहेछ । यसमा बिभिन्न देशका बिद्यार्थीहरूले आ आफ्नो देशका सँस्कार, सँस्कृति एवं भेष भुषा झल्कने प्रदर्शनीहरू गर्ने रहेछन् ।बिभिन्न देशका बिद्यार्थीहरूले cultural night को आयोजना गर्दा रहेछन Nepali
Student Association पनि गत मिति अप्रील 10th 2016 मा Taste of Nepal नामको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । जसमा नेपाली साॅस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । GMU मा 112 देशका बिद्यार्थीहरू पढ्छन। अन्तराष्ट्रीय नाँच प्रतियोगीता को आयोजना International Week at GMU अन्तर्गत International Student Clubs ले आयोजना गर्दोरहेछ । छोरी बिना त्यही पढ्ने र प्रतियोगितामा सहभागी भएकोले यस पटक मैले पनि नजिक बाट यहाँ सहभागी हुन पाएँ । नेपाली विद्यार्थीहरुले अमेरिकामा साँस्कृतिक दुत बनेर प्रस्तुती दिएको मलाई महशुस भयो । नेपाली हुनुमा गर्ब पनि लाग्यो । उक्त कार्यक्रमका केही तस्बीरहरु र भिडियोहरु तल प्रस्तुत छन ।